Penny Auktionshäuser Software - Penny Auktionshäuser Script $0 Free Trial
The newest & most modern Penny Auction Software Solution Available Ask about our 14 zuva vakasununguka muedzo
Zvizununguke Solid Timers World Class Support
Video: Penny Auktionshäuser Software - RapidAuctionSoft
Penny Auktionshäuser Software
Ndinokutendai nokuti kuuya RapidAuctionSoft vanowatengesa uye vagadziri ose Penny Auktionshäuser Software uye Best PHP Penny Auktionshäuser Script iripo
Bvunza pamusoro yedu 10% mutengo mutambo guaranty 1-603-557-1563
Check out yedu Demos peji
Tsvaka zvimwe Nezvedu
chii okisheni Types Tine?
zvino tinokwanisa kupa donhwe shipper integrations, kupa iwe yakakwana turnkey oparesheni!!!
Penny Auktionshäuser Software zvino crypto-mari, unhengo, inodonha pokutumira kushambadza rutsigiro
Ko wako Software mushambadzi siya iwe unsupported?
Hazvinyaradzi inobva pamusoro yekare Michina?
Ko na anoguma spam?
Ko SEO wako kwete kushanda? Hazvina Mobile ushamwari?
Tinogona nokusangana magadzirirwo wako uye kugutsikana kwedu zvikuru mukuru hurongwa
New Update – Zvinosanganisira nani pamakona mifananidzo (sarudza kubva 3 kuno- uye 8 mavara, zvose simba chinyorwa zvino mutauro akatsigira naizvo), RSS, RSS + Atom anodyisa, Sitemaps nokuti Auktionen uye CMS kugutsikana uye mamwe kuchinja vakawanda!!!
We look forward to discussing your Penny Auction Website ideas with you. yeGmail.END_STRONG ose ane pfungwa dzavo uye tinonakidzwa kunyora tsika Auktionshäuser Code, hakuna zvakaoma kwatiri. Tinowana kufara pamusoro ose nemakasitoma dzedu pfungwa, chokwadi ndicho chakanakisisa chikamu basa redu…tinoda kuitawo kufara kwenyu
Call isu chero nguva, Tinoshanda mhiri kwemakungwa nemakambani dzose nguva
Saka imi muri zvakakomba pamusoro e-commerce kana Penny Auction Software business?
Makaita tsvakurudzo yako uye akanzwa nyaya zvakaipa pamusoro mamwe e-zvokutengeserana platforms, uye vari kunetseka pamusoro kutenga kubva anonyatsozivikanwa tsime. Zvakanaka tine shure kwako.
With vakasununguka upgrades A guaranty kuti zvakanaka bhizimisi wakarebesa kutongwa nguva kuti zvatakamboona.
Edza iwo 14 Mazuva pangozi hake rimwe servers dzedu…uye kana wagadzirira dhipuroya wako pachako Server, or choose one of our hosted solutions
Penny Auktionshäuser Script
Ko unofanira kuva Penny Auction Software Solution, Penny Auktionshäuser Script Solutions or an E-Commerce Solution
Best Penny Auktionshäuser Software,Penny Auction Script Solution Available
mu 2018 Takacherechedza kuti Vatengesi anoverengeka Penny Auktionshäuser Software uye E-commerce software were using outdated techniques and little if no modern frameworks. Saka takatanga kunyora, isu akanyora bumbiro redu kubva pasi uchishandisa CodeIgniter nokuda PHP yedu.
CodeIgniter munhu ano MVC Pakuumbwa (mhando, maonero, controller), izvo wakapatsanura pfungwa apo zviri kudiwa, zviri nakisa nyore kudzidza uye kukura nokuda, riri dzichimhanya kupfuura chaiwo PHP, zvikuru yakavimbika zvikuru ramangwana uchapupu.
Asi kuti haana kukwana, nesuwo akaziva kuti chikonzero nei vakawanda PHP chete Penny Auktionshäuser Software servers vanokundikana nokuti ivo vanovimba AJAX timers, zvaidiwa uye mameseji. Mwoyo zvose izvi kuna Socket.io uye Node.JS. Zvichireva kuti Server anogona kutumira mashoko zvakananga nemhosva pasina kudikanwa kwokuti yeGmail.END_STRONG kungoramba kukumbira mashoko matsva.
timers yedu chaizvoizvo chamber kukwikwidzana mune 1000th kwakaita chechipiri. Zvichireva kuti kwedu kukwikwidzana kuri mhanyisa, itsige uye zvikuru yakavimbika pane dzimwe mhinduro. Usanetseka munhu vachinyunyuta pamusoro vakarasika vokupedzisira yechipiri bhidha.
kukwikwidzana Our rinamakwapa zvakarurama pane dzimwe nzvimbo. Unogona chaizvoizvo kuona mukuru bidder shanduko mukati chete wechipiri kana vakawanda vanoshandisa zvamunotiraira panguva imwe chete.
kirasi World Penny Auktionshäuser Design
Pakupedzisira takaziva zvikuru zvinogona vatengi vari vasununguka kubhadharira nemitambo uye kugadzira iri nyore pamwedzi kubhadhara, pamusoro Hwakavimbika mutoro mikwende servers, inopiwa imwe yakanakisisa Server makambani munyika! Saka isu kubata zvose iwe.
Kana iwe outgrow chimwe Server, zvino tinogona uye kuchaita kuti yako Server kana zvichidiwa. Asi uchava vachine zvose zvakanakira yedu shanduro pehurumende Software.
Kwenguva nguva dzose zvikomba zvitsva zvose vanogamuchira vakasununguka kugadzwa, 5 maawa nokudzidziswa uye 5 Maawa rusununguko zvakagadzirwa.
isu Kumbira pamusoro yekutengera yedu plugin.
Tinotsigira kuwedzera mitauro mitsva
Zvizununguke Solid timers, yakawana mune thousandths chechipiri. Kuita izvozvo rakarurama kupfuura zvaidiwa gadziriro iripo.
EDZA USATI TENGA. Free 2 vhiki kutongwa.
Current miitiro inoburitsa zvinhu zvakanyatsofanana zvinosanganisira
Tinewo 25 Penny Auktionshäuser Software madingindira kuti zvinogona kushandiswa zvose zvezvinhu zvedu, zvichireva mukana wokushandiswa zvikuru muna Design nokuda Penny wako okisheni Software
isu Kumbira pamusoro mamwe okisheni mhando, tinoita zvakawanda chaizvo kupfuura chete Penny Auktionshäuser Software
Check out Demos dzedu mhenyu On yedu Demo nzvimbo!!!
Penny Auktionshäuser Software Features
Registration Kazhinji asati achivharidzira bhidha, inodzidzisa kunodiwa kuti kunyoresa.
Login Users anogona zvireruke zvazvakanakira zvakawanda kuva nhengo – danda riri kuchikwama peji kwavo, vanoisa bhidha, wedzera mari nenhoroondo dzavo uye zvakawanda mabasa.
Kutenga Credit / Wedzerai Nomwero Users vanogona kutenga chikwereti uye kuwedzera pachiyero kuchikwama yavo kana Via mubhadharo yhdyskäytävä, bhangi, kana yakananga dhipoziti vasati achivharidzira bhidha.
Place vachiriita Users vanogona kusarudza chigadzirwa uye vanoisa bhidha. The mushandisi anogona kuisa vachiriita vakawanda vachida kusvikira zvikakunda. Vanogonawo kana kuisa chimwe bhidha kana kuponesa bhidha dzavo uye kushandisa Bidbutler kuti yaibva dana kwavo nokuda.
Bidbutler Bidbutler, kunonziwo autobid kana tenzi bhidha, ndipo hurongwa anoisa wako akaponesa vachiriita rwoga ose masekondi gumi, kana yaanopinda penguva iwe tsanangurai.
SMS vachiriita Haufaniri kunyoresa uye danda riri ive SMS bhidha. The SMS zvaidiwa mashoko anogona kuonekwa kufanana okisheni uye kunogona wakasiyiwa Mudzviti kwenzvimbo.
Live Bid History Users kuona kwavo uye zvimwe zvaidiwa mabasa kubva chikamu bhidha nhoroondo mukati chigadzirwa mashoko peji.
WeNobel The weNobel pamusoro okisheni ndiye munhu wokupedzisira vanoisa bhidha apo nguva inosvika razero masekonzi. The weNobel inobhadhara chokupedzisira mutengo kuti okisheni chinhu (ichazovapo yakaderera pane mutengo chaiyo).
Mhando Auktionshäuser Kune mhando dzakawanda okisheni mumusika; zvisinei, kupfuura mukurumbira marudzi vari Regular Auktionshäuser, Fixed Price Auktionshäuser, Nilbitter Auktionshäuser, Free Auktionshäuser uye Rookie Auktionshäuser.
Current zvaidiwa Auktionshäuser List – Pano unogona kuona Current / Live Auktionshäuser zvaidiwa mashoko ako.
Won Auktionshäuser List – Kubva pano unogona kuona zvako yakahwina Auktionen uye kubhadhara chokupedzisira mutengo.
History Bid Archive – Users vanogona kuona kwavo bhidha arşive kubva pano.
wedzera Found (Kutenga Bid Pack) – Vanokwanisa kuwedzera nepakati kuti vanoisa bhidha kubva muchikamu ichi.
Payment Method – Users anogona kusarudza chero mubhadharo nzira, zvose yakavimbika zvikuru, uye kubhadhara okisheni kekupedzisira mutengo. PayPal ndiye default muripo suo.
mutengapwe History – Users anogona kuona zvose zvavo kutengeserana mabasa kubva muchikamu ichi.
Udzikinure Code – Users anogona kudzikinura chaiyo kupa Codes kuti yakabva arun sezvo rudzi nzvimbo kusimudzirwa.
Kureva Shamwari – Users anogona kureva shamwari dzakawanda sezvo vachida. Nekuti mumwe zvivabatsire vanogona kugamuchiravo bhonasi Tera wakasiyiwa arun.
Change Password – Vanokwanisa kushandura nhoroondo dzavo pasiwedhi kubva pano.
Closed Account – Users angavhara nhoroondo dzavo uye havagoni kuzarura nhoroondo dzavo chete kero ye email zvakare.
Newsletter MUMUSANGANO – Users anogona kana vakwanise kana chokukuvadza kuti Newsletter Subscription sarudzo kubva muchikamu ichi.
Subscribe Newsletter Visitors anogona kusaina kumusoro kuti okisheni mugwaronhau kugamuchira Notifications, inogadziridza uye anopa.
Category Management The arun anogona kudzora (wedzera, aongorore kana zvinomuomera kuikanganwa) Mapoka uye kutsvaka Mapato kana nezita kana ID.
Auctions Management Admin anogona kuwedzera, aongorore kana zvinomuomera kuikanganwa Auktionen uye nokutsvaga kwavari namazita, chinzvimbo, mhando uye ID. The arun rinogonawo kutevedzera chete okisheni uyewo kutarira mauri zvaidiwa kare uye mamwe mashoko.
Auctions Report / Delivery Admin kuona mushumo richakunda okisheni kana nezvokuzadziswa Kumukundi. The arun anogona kushandura okisheni kuti kudzamara chinzvimbo kuti hurukuro kubva muchikamu ichi.
Website Kuronga The arun anogona kuisa nzvimbo Kurongwa kubva muchikamu ichi.
Member Management The arun chinogona kuwedzera, aongorore kana zvinomuomera kuikanganwa vanoshandisa kana kutsvaka kwavo hweHIV, zita uye ID. The arun anogona kuona vanoshandisa 'kukwikwidzana & mutengapwe nhoroondo.
Email Kuronga The arun anogona kusarudza email marongero kubva muchikamu ichi – Activate email, Vakakangamwa pasiwedhi nezvimwewo.
WeNobel Management The arun anogona kuisa Kumukundi mazita avo mufananidzo, adhiresi, uye mhinduro yavo.
Site Statistics The arun anogona kuona Website Mushumo uye Export mashoko mu CSV pamanyorerwo.
Time Zone Kuronga The arun anogona kuisa nyika yake nguva mapazi marongero kubva muchikamu ichi.
Special Bayirai / Promotion Management
Time The arun anogona kuisa chaiyo inopiwa uye bonuses kusimudzira Website yavo. Bhonasi Codes achava nguva muganhu.
Bhonasi Kuronga The arun anogona kuisa Signup uye zvivabatsire bonuses.
Bid Pack Management The arun anogona kuisa zvakasiyana bhidha packs it pamwe vakasununguka chikwereti. The arun anogona kuwedzera, aongorore kana zvinomuomera kuikanganwa nerimwe Bid Pack.
Help / FAQ Management Kusika Help uye FAQ mapeji pamwe tsanangudzo.
IP Block The arun rinogona kuvhara chero IP zvakatonyanya Website kuwana.
Change Password The arun angachinja nhoroondo dzavo pasiwedhi kubva pano.
Auto relist uye motokari mazita Auktionen
Login pamwe Facebook kana Twitter
wanda addons / plugins uye optiona mamiriro
Yakanyorwa zveupfumi ano zvinoreva zviri akatsiga uye oneka
Name Your (kunodiwa)
All Subscriptions Come with Free Hosting, munhu $65 per month value! 24 Hour Support and Maintenance! 3 Free Email Accounts! SEO support! 5 Free Hours of Design Support! Free Training and Upgrades as needed!